अनुकूलन डिजाइन बोतलहरू
नेतृत्व गिलास र सीसा मुक्त गिलास कसरी छुट्याउन?
सीसा युक्त चश्माको लामो समयसम्म प्रयोगले रगतमा सिसाको संचय बढाउँछ। एक निश्चित स्तरमा पुगेपछि, यसले व्यक्तिको स्मरणशक्ति र बुद्धिमा ह्रास, मानसिक विकार, दुःस्वप्न, अनिद्रा र अन्य समस्याहरू निम्त्याउँछ। सिसाको विषाक्तता बालबालिकाका लागि बढी हानिकारक...
त्यहाँ कस्तो प्रकारको शैम्पेन चश्माहरू छन्?
पुरातन समयदेखि, त्यहाँ रक्सी र गोबलेट बीच एक प्राकृतिक जोडी सम्बन्ध देखिन्छ, तर होसियार साथीहरूले स्पार्कलिंग वाइनको लागि प्रयोग गरिएको कप धेरै फरक छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्दछ। सामान्य शैम्पेन कपहरू के हुन् र तिनीहरूका विभिन्न प्रयोगहरू के हुन्? 1. Saucer शैम्पेन गिलास वास्तवमा, 1970 सम्म ...
10 साधारण ककटेल गिलास
ककटेल एक रंगीन संसार हो। यो रचनात्मकताले भरिएको छ र धेरै मानिसहरूको मनपर्ने छ। संसारमा ककटेलका अनगिन्ती प्रकारहरू छन्, र ककटेलहरू समात्न प्रयोग हुने कपहरूको पनि आफ्नै विशेषताहरू छन्। बारमा हिंड्दा, तपाइँ निश्चित रूपमा काउन्टमा सबै प्रकारका वाइन गिलासहरू देख्न सक्नुहुन्छ ...
नक्सा गिलास बोतल उत्पादन प्रक्रिया
1.डिजाइन-डिजाइन रेखाचित्रहरू 2.मोल्डहरू बनाउने-क्रोम-प्लेटेड मोल्डहरूसँग मिश्र धातुको इस्पात प्रयोग गरेर, मोल्डहरू बनाउनको लागि पुष्टि गरिएको रेखाचित्र अनुसार 3.सामग्री तयार गर्नुहोस् बोतल उच्च बोरोसिलिकेट गिलासको बनेको छ, उच्च बोरोसिलिकेट गिलासको उपयुक्त आकार चयन गर्नुहोस् ट्यूब र रंग तयार गर्न। ४.फेब्री...
वाइन ग्लास को प्रकार
"राम्रो गिलासको साथ राम्रो रक्सी" के तपाइँ पसलमा विभिन्न शैलीका वाइन गिलासहरू बीचको भिन्नता जान्न चाहनुहुन्छ? कसैले भन्न सक्छ "मलाई परवाह छैन, म केवल कपले पानी पिउन चाहन्छु" बिल्कुल ठीक छ! तर अझै पनि सबैलाई भन्न चाहन्छु कि यो अझै पनि छनौट गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ ...
गिलास को सुन चित्रण प्रक्रिया
तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि धेरै चश्माहरूमा सुनको रिम वा ढाँचाहरू छन्, र धेरै मानिसहरूले गिलासमा पातलो सुनको रिम कसरी बनाइन्छ भनेर सोचिरहेका छन्। त्यसोभए, अर्को, म तपाईंलाई गिलासमा सुन कसरी चित्रित हुन्छ भन्ने बारे संक्षिप्त विवरण दिनेछु। वास्तवमा, त्यहाँ दुई प्रकारका सुन चित्रकारी छन्: म्यानुअल र मेक ...
K9 अल्ट्रा-सेतो क्रिस्टल गिलास बोतल बारे
गिलासका उत्पादनहरूको जन्मदेखि नै, विश्वले क्रिस्टल-स्पष्ट र चम्किलो चमकको जादूलाई पछ्याइरहेको छ, निरन्तर विज्ञान र प्रविधिमा सफलताहरू र कच्चा माल प्रशोधनको सीमाहरू पछ्याउँदै, र धेरै अवास्तविक चित्रहरूमा परम गुणस्तरको अनुभव प्रस्तुत गर्न प्रयास गरिरहेको छ। ।
घोषणा गर्ने प्रक्रिया
डिकल गर्ने प्रक्रिया १.अनबक्सिङ १) दोषपूर्ण उत्पादनहरू छान्नुहोस् र उत्पादन विभागमा फर्कनुहोस्, योग्य उत्पादनहरू प्यालेटमा राखिन्छ र डिकल विभागमा पठाइन्छ। 2) यदि गिलासमा स्टिकर छ भने, यसलाई हटाउनुहोस् र स्टिकरको ग्लु सफा गर्नुहोस्। 3) अयोग्य उत्पादनहरू हुन् ...
काँचका भाँडाहरू उत्पादन गर्ने विधिहरू के हुन्?
1. काँचको भाँडो उडाएर र उडाएर बनेको गिलासलाई दुई तरिकामा विभाजन गर्न सकिन्छ: मेकानिकल ब्लोइङ र म्यानुअल ब्लोइङ। तथाकथित ब्लो मोल्डिंग भनेको मोल्डमा गिलास तरल पदार्थलाई निश्चित उत्पादन आकार बनाउन कम्प्रेस्ड हावा वा म्यानुअल मुख उडाउने प्रयोग गर्नु हो। म्यानुअल ब्लोइङले बि...
मुख उडाउने गिलास उत्पादन प्रक्रिया
मेसिनबाट बनेका चश्माहरू उत्पादन गर्न सरल, समय बचत र प्रभावकारी हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू झन्-झन् सामान्य बन्दै गएका छन्। तर केही विशेष आकारका र रिलीज गर्न गाह्रो हुने आकारहरू, केही रंगीन चस्माका कपहरूका लागि, मुख उडाउनु अपरिवर्तनीय छ। आउनुहोस्। उत्पादन बारे थप जान्नुहोस् ...
गिलासको लागि कस्ता प्रकारका सामग्रीहरू छन्
1. सोडा लाइम गिलास दैनिक चश्मा, कचौरा, आदि सबै यो सामग्री बनाइन्छ, जुन सानो अचानक तापमान भिन्नता द्वारा विशेषता हो। उदाहरणका लागि, यदि फ्रिजको डिब्बाबाट भर्खरै निकालिएको गिलासमा उमालेको पानी हालियो भने, त्यो फुट्ने सम्भावना हुन्छ। थप रूपमा, यो सिफारिस गरिएको छैन ...
क्लासिक व्हिस्की गिलास, तपाईलाई कति थाहा छ?
1. चट्टानमा अन्तिम स्पर्श क्यानाडाली ब्रान्डबाट, ज्वालामुखी व्हिस्की गिलासको फेदमा रहेको ज्वालामुखी चट्टान आकारको छ। आइस बल समावेश मोल्ड संग जमेको छ। व्हिस्की पिउँदा, आइस बल थप्नुहोस्, गिलास बिस्तारै हल्लाउनुहोस्, बरफको बल समान रूपमा रोल गर्नुहोस्, चिसो ...
नम्बर १, जिउजी स्ट्रिट, काओटाङ गाउँ, नानकुन टाउन, पन्यु, ग्वाङ्झाउ, गुआङ्डोङ, चीन
रङको गिलासको बोतल